Yini engcono kakhulu yezikimu zombala wehhovisi lokuhweba? - Office Color Schemes
Home » Yini engcono kakhulu yezikimu zombala wehhovisi lokuhweba?
I-Ultra Violet: Yenza isimemezelo nge-Pantone’s Colour of the Year — i-Ultra violet. Ucabanga ngomthunzi waphezulu onsomi, mkhulu, uyamangalisa, futhi uletha umuzwa wokuqiniseka nobungqabavu kunoma yiliphi igumbi. Akunandaba noma ngabe isikhala sakho asicwaswa noma sigqamile, lo mthunzi uvumelana nezimo ngokwanele ukuba uhambisane nanoma yiluphi uhlelo lokufaka umjondolo futhi lungasetshenziswa ekuqinisekisweni kwezicucu ezigcizelelayo.
Amathoni ajwayelekile: Ngecebo le-biophilic, iphethini elikhulayo elijoyina izingxenye zomhlaba ojwayelekile esimweni esisetshenziselwe ukusika, akusizi neze ukuthi amathoni acebile, emvelo azotholakala ngokuhlanganiswa kwezikhala zehhovisi. Uma ufaka okuluhlaza ngaphakathi nge-mish-mash ejwayelekile, ungenza isimo esivumayo esenza ukuthi abasebenzi bakwazi ukuzibandakanya futhi basebenze isikhathi sosuku. Imibala ethize nenombala omnyama ohambisana nama-blues apholile ingahamba kakhulu ekwenzeni imvelo yesimanje engathandeki.
Bathroom Colors Pictures For Light
Orange Paint Colors With Black Kitc